The Ab Presents Nepal » Breaking News – रबि १८ दिन भित्रमा धरौटीमा रिहा, सिधाकुरा जनतासंग कार्यक्रम ३ महिना सम्म बन्द !!!
Breaking News – रबि १८ दिन भित्रमा धरौटीमा रिहा, सिधाकुरा जनतासंग कार्यक्रम ३ महिना सम्म बन्द !!!
काठमाडौं-: ज्योतीष अर्जुन क्षेत्रीले रवि लामिछाने र उनका समर्थकलाई नआत्तिन आग्रह गर्दै फेसबुकमा स्टाटस राखेका छन् । पत्रकार शालिकराम पुडासैनी प्रकरणमा मुछिएका रवि लामिछानेलाई अनुसन्धानका चल्दै गर्दा क्षेत्रीले फेसबुकमा स्टाटस लेखेका हुन् ।
शिरमा रहेको सुर्य र पृतीको कृपाले रविको जित पक्का हुने बताउदै मगल शनि र केतुले अझै ३८ दिन कष्ट पाँउने र विरोध भत्सर्ना र चर्चा धेरै हुने क्षेत्रीले स्टाटसमा लेखेका छन् ।यसका साथै चन्द्रमाको दृस्ठि सुर्यको प्रभाबबाट रविले नेपाली र अन्तर्राष्टिय जगतमा चर्चा कमाउने क्षेत्रीले स्टाटसमा लेखेका छन् । रविबाटै नेपालमा एउटा इतिहास रचिने र नेपालि राजनीतिमा पनि ठूलो आमूल परिवर्तन र सकारात्मक झडका लाग्ने क्षेत्रीले दाबी गरेका छन् ।’